EST : Nivoaka, omaly, ny anaran’ireo mpandresy tamin’ilay fifaninanana tonon­kalo, mahakasika ny tantaran’ny fanatanjahantena ao Toliara. Telo mirahalahy ny nandrombaka ny laharana telo voalohany, samy nahazo loka avy amin’ny fikambanana Espoirs sportifs de Tuléar”. Laharana voalohany Randrianasolo Chedrique, nahazo Polo EST; faharoa i Hylari Jamal, nahazo tee-shirt EST ary fahatelo kosa i Narcy Kovni, nahazo “mug” EST. Tsy nanadino nisaotra ireo rehetra nandray anjara ny filohan’ny EST, i Vital Serge.
Karate : Hanomboka, anio, eny amin’ny Akademia nasionaly ny fanatanjahantena, Ampefiloha, ilay fampiofanana “kata”, homena ireo mpikatroka valo hatramin’ny 14 taona. Fiofanana hifantenana izay karatekas mendrika ka hisolo tena an’i Madagasika amin’ny fiadiana ny tompondaka an’i Afrika “kata en ligne”. Haharitra roa andro ny
fiofanana ahafahana mijery ny fahaiza-manaon’ny mpikatroka tsirairay, raha ny fanazavan’ny avy eo anivon’ny federasiona. Izay tena mahay sy mahafapo no halaina horonantsary ka alefa hifaninana manerana an’i Afrika.